ROOM တွင်ရေနံပျံ့, ဟိုတယ်ရနံ့ပျံ့, ဟိုတယ်အနံ့ပျံ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. ကမ်းလှမ်းရန်
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ROOM တွင်ရေနံပျံ့,ဟိုတယ်ရနံ့ပျံ့,ဟိုတယ်အနံ့ပျံ့,ဟိုတယ်ပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဟိုတယ်ပျံ့
ဟိုတယ်ပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ROOM တွင်ရေနံပျံ့, ဟိုတယ်ရနံ့ပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဟိုတယ်အနံ့ပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ကလေးများအတွက် Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့
Lavender ရေနံ Nebulizer ပျံ့အတွက်ပစ်မှတ် Plug
Water Drop အကောင်းဆုံးပစ်မှတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
100ml အသိဉာဏ်အိတ်ဆောင် Ultrasonic Diffuser မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ
အသေးစားရနံ့ကုထုံးသစ်သား Aroma Air ပျံ့
300ml ပစ်မှတ်မူလစာမျက်နှာလျှပ်စစ် Ultrasonic အနံ့ရေနံပျံ့
လီလီပန်းအိုး Target Ultrasonic ရေနံပျံ့သြစတြေးလျ
ပစ်မှတ် Ultrasonic အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံစက်ရုံပျံ့
သြစတြေးလျ 500ml လျှပ်စစ်ရနံ့ကုထုံးပျံ့နှံ့ရည်မှန်းချက်
LED Lights ပစ်မှတ်ရနံ့ကုထုံးပျံ့ Essential Oil
လျှပ်စစ် Cool မြူခိုးမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ပစ်မှတ်သြစတြေးလျ
Store ကိုခုနှစ်တွင်ပြတ်သား Image ကိုလူတိုင်းရေနံပျံ့ပစ်မှတ်ထား
နှလုံးနှင့်အတူမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Humidifier ပစ်မှတ်ထား
ပစ်မှတ် Spa အခန်းမြူခိုးအနံ့ပျံ့ Cool
အိတ်ဆောင် Ultrasonic ရနံ့ကုထုံရေနံ Air ကိုပျံ့နှံ့
200ml, DC 24V Led အလင်းမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၁၀ * ၁၁၀ * ၂၄၅ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 455 * 345 * 510mm / 24PCS
ကလေးများအတွက် Ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့ နူးညံ့သောရေနံပျံ့နှံ့နူးညံ့သောဒီဇိုင်းဖြင့်မည်သည့်နေရာကိုမဆိုဖိတ်ခေါ်ပါ။ ဤသိမ်မွေ့သော Accent Aroma diffuser သည် မည်သည့်စားပွဲမဆိုနီးပါး ကိုကောင်းမွန်စေသည် ။ ရေဖြန့်စက်သည်လေကိုစိုပြည်စေပြီးမွှေးကြိုင်သောရနံ့ကုထုံးဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - 120 * 120 * 220mm နှင့် Master ပုံး - 495 * 375 * 460mm / 24pcs
Lavender ရေနံ Nebulizer ပျံ့အတွက်ပစ်မှတ် Plug ကျွန်ုပ်တို့၏ 300ml Ultrasonic Diffuser သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုလေထဲသို့ပျံ့နှံ့စေခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေဖြန့်ဝေသည့်နည်းလမ်းနှင့် ultrasonic နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများသည်မည်သည့်အခါမျှအပူမပေး -...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၂၅၀ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - ၅၂၅ * ၃၅၅ * ၅၂၀mm / ၁၂pcs
Water Drop အကောင်းဆုံးပစ်မှတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ Waterless automatic switch-off - ဤသစ်သားပျံ့နှံ့မှုသည်ရေကုန်သွားသောအခါအလိုအလျောက်ပိတ်သွားသည်။ Ultrasonic ပျံ့နှံ့သင့်အိမ်, ရုံး, ယောဂစတူဒီယို, အားကစားရုံသို့မဟုတ်ဟင်းလင်းပြင် fit နှင့်အလေးပေး နိုင်ပါတယ်။ အလွန်တိတ်ဆိတ်သော ultrasound လုပ်ဆောင်ချက် - ၃၅...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 13.69 - 15.08 / Piece/Pieces
နယူးကဘလူးတုသ်ဂီတရေနံပျံ့ Ultrasonic Cool မြူခိုး DITUO - ကျွန်ုပ်တို့၏နိယာမဆုံးသောအသေးစိတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဖောက်သည်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအနံ့ပျံ့, DITUO ဒါ့အပြင်ကွဲပြားတဲ့အမှတ်တံဆိပ် Is ကိုယ်စားပြုကော်မတီ, ၎င်း၏ထူးခြားသောပုံစံရှိထားသည်။ ဘလူးတုသ် Humidifier -...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၉၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - 525 * 355 * 400mm / 24pcs
ဟိုတယ်အခန်းနံ့မွှေးသောအနံ့အရသာပျံ့စက် DITUO ရေဖြန့်စက်အားစွမ်းရည် ၂၈၀ မီလီမီတာအထိတိုးမြှင့်ထားပြီးမြူသည်ယခင်ထက်ကြာရှည်ခံနိုင်သည်။ သင်၏အိမ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ultrasonic အငွေ့ပျံပျံ့နှံ့နိုင်သောနည်းပညာဖြင့်သစ်သားစပါးပျံ့နှံ့မှုကိုသက်သာစေပြီးနူးညံ့ချောမွေ့သောမြူမှုန်ကိုတိတ်တဆိတ်ထုတ်လွှတ်သည်။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၁၀ * ၁၁၀ * ၁၉၀ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 455 * 345 * 400mm / 24PCS
100ml အသိဉာဏ်အိတ်ဆောင် Ultrasonic Diffuser မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ VERISON အသစ်ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ Essenial Oil Diffuser သည်အဆင့်မြှင့်ထားသောပုံစံဖြစ်သည်။ ဒီပိုကောင်းတဲ့ဗားရှင်းကသင့်ရဲ့အိပ်ခန်း၊ ပျိုးခင်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ရုံးခန်း၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းပညာ - Ultrasonic 100ml Cool Mist Humidifier...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၂၀၅ * ၁၉၅ * ၁၁၅ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 60 * 42.5 * 25cm / 12PCS
2019 လက်ကားအသစ်ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံရနံ့ကုထုံးပျံ့ ၁။ သဘာဝပွင့်လင်းမြင်သာသောနှင်းခဲဖန်သားပြင်၊ LED မီးချောမွေ့စေခြင်း။ 2. Ultrasonic ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏မူလသက်ရောက်မှုကိုစောင့်ရှောက်။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၁၅ * ၁၁၅ * ၂၂၅ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 600 * 455 * 250mm / 12PCS
အသေးစားရနံ့ကုထုံးသစ်သား Aroma Air ပျံ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အာရုံခံမှုအတွက်မလွယ်ကူပါ။ ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှာဆီတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအပြည့်အဝစုပ်ယူချင်ခဲ့တယ်၊ အခုဆိုရင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 13.54 - 15.39 / Piece/Pieces
300ml ပစ်မှတ်မူလစာမျက်နှာလျှပ်စစ် Ultrasonic အနံ့ရေနံပျံ့ စိုထိုင်းဆနိမ့်သောကြောင့်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း၊ နှာခေါင်းပေါက်နေခြင်းနှင့်လည်ချောင်းများသို့မဟုတ်ယားယံနေသောမျက်လုံးများနှင့်မပျော်ပါသလော။ ခြောက်သွေ့သောလေသည်မသက်မသာဖြစ်နိုင်ပြီးသင်၏ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်၏သဘာဝအကာအကွယ် များကိုလည်းလျော့နည်းစေသည် ။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၂၅ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 525 * 355 * 520mm / 12pcs
လီလီပန်းအိုး Target Ultrasonic ရေနံပျံ့သြစတြေးလျ ၎င်း၏ထူးခြားသောပေါ့ပါးသောသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားနှင့်ပြုလုပ်ထားသောဇင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပုံသဏ္vာန်ပန်းအိုးဖြင့်သစ်သားစပါးပျံ့နှံ့စက်သည်ကိရိယာတစ်ခုတည်းတွင်လုပ်ဆောင်ချက် ၄ ခုကိုလုပ်ဆောင်သည် - air humidifier, purifier, night light နှင့် aromatherapy ။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၂၂၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - ၅၂၅ * ၃၅၅ * ၄၇၀ မီလီမီတာ / ၁၂pcs
ပစ်မှတ် Ultrasonic အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံစက်ရုံပျံ့ ဤအ plug-in ကိုသစ်ပျံ့7LED အရောင်သက်ရောက်မှုကိုထောက်ခံပါတယ်။ LED effect များကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိတ်နိုင်သည်။ ၄ ချိန်ညှိချိန် - ၁ နာရီ / ၃ နာရီ / ၆ နာရီ / တည်ငြိမ်သည်။ ရေကုန်သောအခါအလိုအလျောက်ပိတ်ပါ။ ultrasonic diffuser လည်းဆိုလိုသည်မှာအလွန် Ultra...
သြစတြေးလျ 500ml လျှပ်စစ်ရနံ့ကုထုံးပျံ့နှံ့ရည်မှန်းချက် ဤသည် ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့အံ့သြဖွယ် multifunction device ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ရနံ့ကုထုံးအတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်အပြင်၊ ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့မှုသည်လေ သန့်စက်နှင့်လေစိုထိုင်းစက် အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် ။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၂၀၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံးများ - ၅၂၅ * ၃၅၅ * ၄၃၀ မီလီမီတာ / ၁၂pcs
LED Lights ပစ်မှတ်ရနံ့ကုထုံးပျံ့ Essential Oil ရိုးရှင်းသောကုသမှု - ရေနှင့်မွှေးကြိုင်သောအဆီများသည်အငွေ့ပျံပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရနံ့အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေခြင်း၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့များကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကိုတိုးတက်စေခြင်း။ LED Lights:...
ultra-တိတ်ဆိတ်ပစ်မှတ်မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ AU အခန်းတစ်ခန်း, ရေချိုးခန်း, ယောဂအခန်းတစ်ခန်း, SPA ကုမ္ပဏီဆိုင်, ကြံ့ခိုင်ရေးအခန်းတစ်ခန်း, ဧည့်ခံ, ညီလာခံကအခန်း, ဟိုတယ်အသကျရှငျအနံ့ပျံ့အိပ်ခန်းထဲမှာအသုံးပြုမှုအတွက်ဝတ်စုံ, လေ့လာမှု, ရုံး။ timer, 1 နာရီကြာမှသူကအလိုအလျှောက်ကိုပိတျထား-ပယ်လိမ့်မည်ဟုရှိရာရှေးခယျြသောအခြိနျရဲ့အဆုံးမှာ...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 125 125 * 215mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 390 515 * 450mm / 24pcs
လျှပ်စစ် Cool မြူခိုးမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ပစ်မှတ်သြစတြေးလျ CLASSY Additional: ခေတ်သစ်ရေနံပျံ့အာကာသ, အိပ်ရာအခန်းတစ်ခန်းနှင့်အယူခံဝင်ဖမ်း eye- များအတွက်သစ်သားကဲ့သို့စပါးကို finish ကိုအတူဒီဇိုင်းပို ultrasonic ပျံ့နထေိုငျ, သင့်ရုံးခန်းများအတွက်စုံလင်သည်။ DIMMABLE အလင်း LED:7soothing LED ကိုစိတ်ဓါတ်များအလင်းအိမ်နှင့် 2...
Store ကိုခုနှစ်တွင်ပြတ်သားပုံကိုလူတိုင်းရေနံပျံ့ပစ်မှတ်ထား 400ml မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ သဘာဝအနံ့ပျံ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုပတ်ဝန်းကျင်လျှော့ပေါ့, တစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်ဖန်တီးဖို့မွှေးကြိုင်, အရောင်-ပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်ဓါတ်များအလင်းရောင်ပေးသည်။ နေအိမ်, ရုံး, အိပ်ခန်း, ဧည့်ခန်း, လေ့လာမှု, ယောဂ, spa များအတွက်စံပြ။...
နှလုံးနှင့်အတူမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Humidifier ပစ်မှတ်ထား ဖြေလျော့ပေးခြင်း, ရနံ့ကုထုံအလုပ်လုပ်ကြရအောင်: သင်၏ hectic, အလုပ်ရှုပ်အချိန်ဇယားလည်းစိတ်ဖိစီးမှုလား? သငျသညျတင်းမာမှုသက်သာရာနှင့်စိတ်အေးလက်အေးခံစားမိလိုပါသလား...
ပစ်မှတ် Spa အခန်းမြူခိုးအနံ့ပျံ့ Cool ဤသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ခရီးဆောင်ပျံ့ & humidifier အကောင်းဆုံးသစ်သားကြည့်စပါးနှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်သင့်အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးမှာဆိုစိတ်ကူးနှင့်အတူသွားနေသည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးရနံ့ဆီနှင့်တွဲ,...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 175 175 * 270mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 36.5 54 * 56cm / 12pcs
ပန်းပွင့်အစီအစဉ်ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ 500ml ရေနံပျံ့ Multi-အရောင်အလင်းနှင့်အတူမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Heatless ရေနံပျံ့ Dituo အရှင်အဆီများ၏အနာရောဂါငြိမ်းစရာနှင့်သဘာဂုဏ်သတ္တိများထိန်းသိမ်းခြင်း, heatless ရေနံပျံ့နှံ့ခွင့်ပြုအဆင့်မြင့် ultrasonic နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ကုထုံးမြူခိုး...
အိတ်ဆောင် Ultrasonic ရနံ့ကုထုံရေနံ Air ကိုပျံ့နှံ့ ULTRASONIC အဓိကကျသော OIL ပျံ့။ ဤသည် ultrasonic ပျံ့ခန်းများအတွက်စုံလင်သည်နှင့်မီးဖိုချောင်, ဧည့်ခန်း, ဒါမှမဟုတ်အိပ်ခန်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောဖန်ပျံ့ဖြစ်ပါတယ်။ Beauty ငျးလကျဖန် DESIGN လွ။ ယင်း၏လှပသောဒီဇိုင်းနှင့် diffusing အနံ့နှင့်အတူတစ်ဦးရိုးရှင်းသော, ငြိမ်းချမ်းသော,...
200ml, DC 24V Led အလင်းမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ လျှော့ပေါ့ငါတို့ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့နှင့်သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးမှ ambiance ကဲ့သို့ spa ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ပျံ့ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းသင်သည်တတ်နိုင်ဒါတိတ်တဆိတ်နေ့ကိုမဆိုအချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်သည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ ဟိုတယ်ပျံ့ ပေးသွင်း
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. ROOM တွင်ရေနံပျံ့, ဟိုတယ်ရနံ့ပျံ့, ဟိုတယ်အနံ့ပျံ့ရာပူဇော်သက္ကာကို။
ဟိုတယ်ရနံ့ပျံ့ဟိုတယ်များ၏ထောင့်မှရနံ့ပျံ့နှံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မွှေးဟိုတယ်သင်နွေးခံစားမှုတွေ့ကြုံခံစားပါစေပါလိမ့်မယ်, အိမ်သူအိမ်သားများထဲကတစ်ဦးသည်နေ့ရက်သည်ငြီးငွေ့ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနေသောသူငယ်ချင်းအမြဲတမ်းချိုးယူနေတဲ့ပူနွေးတဲ့ဆိပ်ကမ်းကိုရှာဖွေချင်တယ်။ ဟိုတယ်အားလုံးခံစားနေရပြီးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်မရှိသဖြင့်အထူးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စတိုင်ဖြစ်ပြီး, ပဲအနီးဆုံးတဦးတည်းကျွန်တော်တို့အများစု၏အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ပါ။
ငါဘယ်လိုဖောက်သည်တွေနဲ့နေဖို့ဆွဲဆောင်နိုင်သလဲ ဟိုတယ်အနံ့ပျံ့အများဆုံးတိုက်ရိုက်နှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်မွှေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာသာ၏အထူးအဓိပ္ပာယ်ငါပေးမည်။ ကျနော်တို့အကျွမ်းတဝင်အရသာအနံ့ပဲရပျကိုဖြတ်သန်း, စစ်ဆေးနေတွေ့သွား, အချိန်စဉ်းစားတွေးခေါ်သုံးဖြုန်းဖို့လိုအပ် don`t ကျနော်တို့ပြီးသားပိုင်၏အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်, ဒါကခံစားချက်အိမ်ရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်ပျံ့ဖောက်သည်ကဒီမှာရပ်ခွင့်ပြု, ဖောက်သည်တွေအတွက်နွေးဆိပ်ကမ်းဖန်တီးရန်ဟိုတယ်ကူညီပေးသည်, ထိုရနံ့ဟာယာဉ်ရပ်နားအများကြီးအပေါ်သတ်မှတ်ထားသောအလင်းဖြစ်၏။
100ML USB ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလျှပ်စစ်အိတ်ဆောင်နူဘိုင်ပျံ့